Sun, Apr 22, 2018 | 02:54:36 NST
सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट निति ल्याएको छ। यो निकै महत्वपूर्ण निति हो। तर म्यानपावर कम्पनीले कार्यान्वयन नगरिरहेको कुरा प्रति सरकारले कति जनालाई कार्वाहि गरेको छ ? सरकार आफैले ल्याएको निति निर्देशनलाई आफैले रक्षा गर्न सक्नुपर्‍यो। नभए म्यानपावर कम्पनीहरुले भने जस्तै एक महिना बराबरको तलवमा सहमति गरेर नगद रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बाट बच्न सकिन्थ्यो कि ?
विनायक नेपाली/ दाङ
युवा विदेश भनेपछि फुरुक्क पर्छन । तर त्याहाँ गएपछि मात्र थाहा हुन्छ कस्तो कष्ट हुन्छ भनेर। भन्निछ नि नमरी स्वर्ग देखिदैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडी नै सोच्नु पर्छ कि कहाँजाने ? कुन ठाउँ जाने र कसरी जाने ? के कामका लागि जाने ? आफुसँग के कस्तो सिप छ भनेर बुझ्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जानु उचित हुन्छ ।
चाँदनी बोगटी / कञ्चपुर
निश्चय नै वैदेशिक रोजगारमा पूरा जीवन गुजार्नु राम्रो होइन । एक त आफ्नो परिवार र गाउँठाउँबाट अलगिनु पर्ने, अर्को कुरा परदेशमा आफूले चाहेजस्तो हुन्न । तर विदेशमा २ बर्ष विताएर नेपाल पुग्दा कुनै काम थाल्न हिम्मत नै आउँदैन । अनि २ महिनाको छुट्टि वितायो र विदेश फर्कियो । आत्मविश्वास नभएकाले वा काम गर्ने वातावरण नभएको हो, धेरै नेपाली युवालाई यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपाल सरकारले युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु भन्दा नेपालमै रोजगारी सृजना गरेर काममा लगाइ दिए हुन्थ्यो ।
कमल धामी /दार्चुला
नेपाल कृषी प्रधान देश भएपनि युवाहरु विदेश पलायन भएका कारण कृषीमा काम गर्ने भनेका कि त १६ वर्ष मुनीका छन कि त ४० वर्ष कटिसकेका छन। खासगरी देशमा रोजगारीको अवसर नहुदा धेरै युवा विदेशिन बाध्य छन, नेपालीले स्वदेशमै बसेर व्यावसाय गरेर पनि उन्नती गर्थे होलान तर गाउँघरमा विदेश जान्छु भन्दा ऋण दिने तर घरमै बसेर व्यावसाय गर्छु भन्दा कसैले पनि ऋण नदिने भएका कारण युवाहरु विदेशिएका हुन ।
विनिता निरौला / ओखलढुङ्गा
गएको असार २१ गतेबाट शुन्य लागतमा विदेश पठाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य र सराहनीय छ । यो नियम धेरै वर्ष पहिले लागु गर्नुपर्थ्यो । ढिलै भए पनि गरिब र उत्पीडितका छोराछोरीले राहत महशुस गरेका छन् । यसको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।
पृथ निरौला, खोटाङ
विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले आफ्नो कर्तव्य र नियम पालना गर्नु भएन भने जीवन अलपत्र हुन सक्छ । त्यसैले विदेशमा रहदा अनुशासित ढंगले काम गरेर बस्यो भने आफैंलाई सजिलो हुन्छ ।
जनक बिसी, जाजरकोट
विदेशमा हुने मृत्युदर घटाउन सबैभन्दा पहिले नेपालीले विदेशमा रक्सी खान छोड्नुपर्छ । काम गर्ने समय ८ घण्टा मात्र हुनुपर्छ । अनि नेपाल झैं सम्झेर सडकमा ख्याल नगरी हिंड्ने बानी छोड्नुपर्छ । र सरकारले विदेशमा रहेका शवहरु चाडैं स्वदेश फर्काउन सम्बन्धित नेपाली दूतावासले त्यस देशको सरकारलाई दवाव दिनुपर्छ । दूतावासका कर्मचारीले नेपालमा जस्तो घाम छल्ने काम गर्नु हुँदैन ।
मलेसिया पूर्वी एसियामा तीब्र आर्थिक विकास गरिरहेको मलेसिया बहुजातीय र बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । मलेसियामा मुस... थप जानकारी